Ismaaciil Cumar Geelle - Wikipedia
Laga soo bilaabo 8 Maayo 1999
Aqalka Madaxtooyada, Caasimada Jabuuti
Xilka soo bilaabay
La aas aasay
27 Juun 1977
10,000 USD sanadkii
Xubin ka ah Jaamacada Carabta
Cabdiqaadir Kaamil Maxamed
Af-hayeen: Maxamed Cali Xaamud
Wasaarada Arimaha Dibedda
Wasaarad: Maxamuud Cali Yuusuf
Dalgalka iyo Fiisaha
Africa portal Siyaasadda portal
Ismaaciil Cumar Geelle, (Dhashay 27 Nofeember 1947) waa madaxweynaha Dalka Jamhuuriyada Jabuuti waxaana talada dalkaasi loo doortay sanaddii 1999-kii xiligaasi oo uu xilka kala wareegay madaxweynihii isaga ka horeeyey Marxuum Xasan Guuleed Abtidoon kaasi oo jabuuti madaxweyne ka soo ahaa tan iyo markii ay jabuuti ka xorowday guumaystihii faransiiska sanadku markuu ahaa 1977.. Madaxwayne ismaaciil cumar geele waxa hadana markale loodoortay jagada madaxtinimada jabuuti labo jeer oo kale. Taariikh
Ismail Omar Guelleh meets U.S. President George W. Bush, January 21, 2003.
Geelle wuxuu ku dhashay Dire Dawa, Itoobiya, wuxuu ku biiray qabiilka siyaasadeed ee xoogga leh ee Mamassan ee qabiilka Dir Ciise.  Markii Geelle uu yaraa waxa uu dhigan jiray dugsi quraan oo dhaqameed. Dabayaaqadii 1960-meeyadii, Geelle waxay u guureen Jabuuti ka hor inta ay dhameeyeen dugsiga sare. Kadibna wuxuu ku biiray bilayska, isagoo noqonaya sarkaal madax banaan. Kadib markii uu Jabuuti noqday madaxbannaan, wuxuu noqday madaxa booliska qarsoodiga ah iyo madaxa golaha xukuumadda ee adeerkiis Hassan Gouled Aptidon. Wuxuu tababarka ka helay Adeegga Ammaanka Qaranka Soomaaliya kadibna wuxuu ka soo qaatay Adeegga Sirta Faransiiska, waxaana loogu talagalay inuu noqdo noqoshiisa adeerkiis. "Furaha guusha Guelleh waa qaabka ugu fiican ee uu ku ciyaaray kaararka gacantiisa adag", sida laga soo xigtay PINR.
3 Warbixino Madax Banaan
Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu la kulmay Madaxweynaha Mareykanka George W. Bush, Janaayo 21, 2003. Bishii Febraayo 4, 1999, Madaxweyne Gouled Aptidon wuxuu ku dhawaaqay inuu ka fariisan doono wakhtigii doorashooyinka soo socda, iyo shirweynihii aan caadiga ahayn ee Xisbiga, RPP, wuxuu u doortay Geelle inuu noqdo musharaxa madaxweynanimada. Guud ahaan gebogebada RPP iyo garabka midaysan ee Jabhadda Midawga iyo Dimuqraadiyadda (FRUD), Geelle wuxuu ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo ee la qabtay 9-kii Abriil, 1999-kii isagoo 74.02% codadka, isaga oo ka adkaaday murashixiisa kaliya, Moussa Ahmed Idriss.   Wuxuu xafiiska qabtay 8-dii Maajo.  Moussa Ahmed Idriss ayaa loo xiray bishii September ka dib markii uu "hanjabay niyadda ciidamada" oo lagu xiray goob aan la garanayn. 
Bishii Disembar 2000, Geelle ayaa ceyriyay taliyaha ciidanka Booliska Qaranka, Yacin Yabeh; askariga daacada u ah Yacin oo aan wax guul darro ah loo geysan ka dib markii uu shaqada ka eryay. 
Geelle waxaa loo magacaabay RPP munaasabaddiisii ​​madaxweynenimada markii labaad oo ah 7dii Oktoobar, 2004, oo ka dhacay Congress-kii aan caadiga ahayn ee xisbiga. Waxa taageeray dhowr xisbi oo kale  wuxuuna ahaa musharaxii keli ah ee doorashadii madaxweynenimada ee dhacday 8-dii Abril, 2005.  Isaga oo aan lahayn tartan, wuxuu ku guuleystay 100% codadkii la dhiibay waxaana loo dhaariyay lix sano oo labaad, kaas oo uu sheegay in uu noqon doono kii ugu dambeeyey, May 7 
Si kastaba ha ahaatee, sannadkii 2010, Geelle wuxuu ku qanciyay Golaha Qaranka ee Jabuuti inuu beddelo dastuurka qaranka, isaga oo u oggolaanaya inuu istaago muddo saddexaad ah.  Tani waxay si cad u cadeeyeen in uu magaciisa ku qorayo codbixinta doorashadii Jabuuti ee 2011-kii. Waxay sidoo kale keentay dibad-bax ballaadhan oo ka bilaabmay 2010-kii oo la mid ah dhaqdhaqaaqa ballaaran ee dimoqraadiyada ee dalalka Carabta. Dibad-baxyada ayaa si degdeg ah loo dhigey.
Xisbiyada mucaaradka ayaa si rasmi ah u ansixiyay doorashadii, iyada oo kaliya hal musharax yar oo la yiraahdo isaga oo ka soo horjeeda codbixinta. Geelle wuxuu ku guuleystay 80% codadka.  Human Rights Watch ayaa su'aal ka keenay in doorashada loo yeeri karo caddaalad markii hoggaamiyeyaasha mucaaradka lagu xirxiray laba jeer ka hor codeynta.
Ra'iisul wasaarayaashii Jabuuti
Xisbiyada Siyaasada Jabuuti
Warbixino Madax Banaan[wax ka badal | wax ka badal xogta]
↑ . 29 October 2015 http://voiceofdjibouti.com/tables-turned-at-djibouti-corruption-trial/. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Dagaalkii Labaad Aduunka
Ciise iyo Canfar
Jabuuti Frank (lacagta)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ismaaciil_Cumar_Geelle&oldid=210806"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Abriil 2021, marka ee eheed 19:21.